Picture of Beauty (mmsub)
by CHANNEL+ October 23, 2020
(18+) Picture of Beauty မွနျမာစာတနျးထိုး
DSဖနျတှအေကွိုကျ ဝမျးနညျးကွညျနူး ရဈမူးစမေယျ့ Drama/Romance ကားလေးပါ. ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့..ရှာရဲ့ အလှပဂေးလေး ဂြူလီယာဟာ လုံးကွီးပေါကျလှအရှယျရောကျနပေမေယျ့ သူ့ရဲ့အခဈြသီးကို ဆှတျခူးမယျ့ ယောကျြားသားတော့ မရှိသေးပါဘူး. ..အဲ့ဒါကွောငျ့ သူမဟာ အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ ပွညျ့တနျဆာခနျးက သူငယျခငျြးကောငျမလေးနဲ့သာ ဆန်ဒကိုဖွသေိမျ့နရေပါတယျ.
ဒါပမေယျ့ တနမှေ့ာတော့ သူမ မိသားစုဟာ သမီးကညာအခါမလငျ့စနေဲ့ဆိုသလို ယောကျြားပေးစားဖို့ ကွံစညျခဲ့ကွပါတယျ…ဂြူလီယာလေးကလဲ သူမ အခဈြသီးကို ဆှတျခူးမယျ့ အာကောငျးမောငျးသနျယောကျြားကို မြှျောလငျ့နတော ကွာပွီမို့ လကျခံခဲ့ပါတယျ…ဒါပမေယျ့ ကံဆိုးစှာပဲ သူမခငျပှနျးဟာ သူမရဲ့ ပထမဆုံးအခဈြသီးကို ဆှတျခူးပွီးတာနဲ့ သူမကို စိတျမပါတော့ပါဘူး.
အဲ့ဒီတခြိနျတညျးမှာပဲ သူ့သူငယျခငျြးမလေးဟာ သူတို့ပွညျ့တနျဆာခနျးအတှကျ ပနျးခြီကားခပျြဆှဲရာမှာ အလှဆုံးမိနျးမတဈယောကျလိုတာကွောငျ့ သူမကို အပွငျးအထနျရှာဖှနေခေဲ့ပါတယျ…သူမ သူငယျခငျြးဟာ ရှာဖှတှေရှေိ့ခြိနျမှာတော့ သူမတို့
ပနျးခြီကားဟာ ပွီးပွညျ့စုံခဲ့ပွီး ဂြူလီယာလေးဟာလဲ သူမကို တကယျခဈြသူနဲ့
ဆုံကာ အခဈြပနျးတှေ ထပျမံပှငျ့လနျးခဲ့ပုံကို ဆှတျပြံ့ကွညျနူးဖှယျ ရိုကျပွထားတဲ့ ၂၁+ဇာတျကားလေးဖို့ ကွညျ့ဖွဈအောငျ ကွညျ့ဖို့ ညှနျးပါရစေ.
(18+) Picture of Beauty မြန်မာစာတန်းထိုး
DSဖန်တွေအကြိုက် ဝမ်းနည်းကြည်နူး ရစ်မူးစေမယ့် Drama/Romance ကားလေးပါ. ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့..ရွာရဲ့ အလှပဂေးလေး ဂျူလီယာဟာ လုံးကြီးပေါက်လှအရွယ်ရောက်နေပေမယ့် သူ့ရဲ့အချစ်သီးကို ဆွတ်ခူးမယ့် ယောကျာ်းသားတော့ မရှိသေးပါဘူး. ..အဲ့ဒါကြောင့် သူမဟာ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ပြည့်တန်ဆာခန်းက သူငယ်ချင်းကောင်မလေးနဲ့သာ ဆန္ဒကိုဖြေသိမ့်နေရပါတယ်.
ဒါပေမယ့် တနေ့မှာတော့ သူမ မိသားစုဟာ သမီးကညာအခါမလင့်စေနဲ့ဆိုသလို ယောကျာ်းပေးစားဖို့ ကြံစည်ခဲ့ကြပါတယ်…ဂျူလီယာလေးကလဲ သူမ အချစ်သီးကို ဆွတ်ခူးမယ့် အာကောင်းမောင်းသန်ယောကျာ်းကို မျှော်လင့်နေတာ ကြာပြီမို့ လက်ခံခဲ့ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ကံဆိုးစွာပဲ သူမခင်ပွန်းဟာ သူမရဲ့ ပထမဆုံးအချစ်သီးကို ဆွတ်ခူးပြီးတာနဲ့ သူမကို စိတ်မပါတော့ပါဘူး.
အဲ့ဒီတချိန်တည်းမှာပဲ သူ့သူငယ်ချင်းမလေးဟာ သူတို့ပြည့်တန်ဆာခန်းအတွက် ပန်းချီကားချပ်ဆွဲရာမှာ အလှဆုံးမိန်းမတစ်ယောက်လိုတာကြောင့် သူမကို အပြင်းအထန်ရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်…သူမ သူငယ်ချင်းဟာ ရှာဖွေတွေ့ရှိချိန်မှာတော့ သူမတို့
ပန်းချီကားဟာ ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီး ဂျူလီယာလေးဟာလဲ သူမကို တကယ်ချစ်သူနဲ့
ဆုံကာ အချစ်ပန်းတွေ ထပ်မံပွင့်လန်းခဲ့ပုံကို ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ် ရိုက်ပြထားတဲ့ ၂၁+ဇာတ်ကားလေးဖို့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ဖို့ ညွှန်းပါရစေ.
Link - https://mkvlinks.xyz/SPYJK2